एकैपटक १० वटा बच्चा जन्माएको खबरबारे यस्तो निस्कियो वास्तविकता - Deshko News Deshko News एकैपटक १० वटा बच्चा जन्माएको खबरबारे यस्तो निस्कियो वास्तविकता - Deshko News
एकैपटक १० वटा बच्चा जन्माएको खबरबारे यस्तो निस्कियो वास्तविकता
एजेन्सी, असार १०
दक्षिण अफ्रिकामा खुसियामी सिटोले नामकी महिलाले एकैपटक १० वटा बच्चा जन्माएको भन्ने दाबी झुटो साबित भएको त्यहाँका अधिकारीले बताएका छन् । गौतेंग प्रान्तका अधिकारीले राज्यका कुनै पनि अस्पतालमा एकैपटक १० बच्चा जन्मिएको कुनै रेकर्ड नभएको जानकारी दिएका छन् ।
खुसियामी सिटोले हालै गर्भवती समेत नभएको अधिकारीले खुलासा गरेका छन् । हाल यी महिलाको ‘मेन्टल हेल्थ एक्ट’ अन्तर्गत हेरविचार गरिँदैछ र उनलाई हर सम्भव मद्दत प्रदान गरिएको छ ।
आधिकारिक बयानमा १० बच्चाको जन्मको झुटो कहानी बुन्नुको पछाडिको कारणबारे जानकारी दिइएको छैन । तर यो खबरलाई सबैभन्दा पहिला छाप्ने प्रिटोरिया न्यूजको मालिक कम्पनी इन्डिपेन्डेन्ट अनलाइनले ऊ आफ्नो कहानीमा अडिग भएको बताएको छ ।
कम्पनीले खुसियामी सिटोलेले राजधानी प्रिटोरियाको स्टीव बिको एकेडेमिक अस्पतालमा सात जूनमा १० बच्चालाई जन्म दिएको तर अस्पतालसँग यति बच्चालाई एकैटिक सुत्केरी गराउनका लागि पर्याप्त तयारी नभएको आरोप लगाएको छ । अब प्रिटोरिया न्यूजले प्रान्तीय स्वास्थ्य अधिकारीले मेडिकल लापरवाहीमाथि लिपपोत गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
तर सरकारी अधिकारीले यसको खण्डन गरिरहेको छ । उनले एक बयान जारी गर्दै भनेका छन्, ‘लापरवाहीको आरोप झुटो र निराधार छ । यो स्टीव बिको अस्पताल र गौतेंगको प्रान्तीय सरकारको इज्जतमाथि दाग लगाउने कोसिस हो ।’ बयानमा प्रिटोरिया न्यूज र यसका प्रधान सम्पादक पीट रांपेडीविरुद्ध कानूनी कारवाही गरिने बताइएको छ ।
खबर कसरी फैलियो ?
खुसियामी सिटोले र उनका श्रीमान् तेबोहो त्सोतेत्सी गौतेंग प्रान्तको थेम्बिसा इलाकामा बस्छन् । यो इलाका जोहेन्सबर्ग नजिकैको हो ।
उनका ६ वर्षका जुम्ल्याहा सन्तान पनि छन् । खबर छाप्ने कम्पनी इन्डिपेन्डेन्ट अनलाइनका अनुसार उनका पत्रकार र रांपेडी एउटा चर्चामा जाने गरेको र त्यहाँ नै दुईको भेटघाट भएको हो ।
मे महिनामा यी पत्रकारले दम्पत्तिको अन्तरवार्ता लिएको र उनीहरुले आफूहरुले एकैपटक आठ सन्तानलाई जन्म दिने अपेक्षा गरिरहेको बताइएको छ । उक्त अन्तरवार्ताका बेला सिटोलेको फोटोसुट पनि गरिएको जसमा उनलाई गर्भवती देखाइएको आरोप लागेको छ ।
प्रिटोरिया न्यूजले १० बच्चाको जन्मको कहानी ८ जूनमा प्रकाशित गरेको थियो । खबरको स्रोत सिटोलेका श्रीमान् त्सोतेत्सीलाई बताइएको छ । त्सोतेत्सीले पछि कोरोना भाइरसका कारण उनी अस्पताल नगएको तर उनलाई यसबारे सिटोलेले मेसेज पठाएको बताएका थिए ।
प्रिटोरिया न्यूजले एक ह्वाट्सएप मेसेजमाथि विश्वास गर्यो तर अस्पतालले यो खबर पुष्टि गरेन ।इलाकाका मेयरले पनि यो खबरको पुष्टि गरेका थिए । यसैकारण बीबीसीसमेत थुप्रै मिडिया संस्थाले यो खबर प्रकाशित गरेको थियो । तर अब सरकारका प्रवक्ताले मानिसहरुले १० बच्चाको जन्मबारे सुनेका त छन् तर कसैले पनि नदेखेको बताएका छन् ।
लाखौं रकम जुट्योः
खबर छापिएपछि यी बच्चा थेंबिसा १० को नामले चर्चित भए र मानिसहरुले उनका लागि रकम संकलन गर्न थाले । इन्डिपेन्डेन्ट अनलाइनका अध्यक्ष इकबाल सुर्वे आफैंले बच्चालाई करिब ८० लाख रुपैयाँ दान दिए ।
तर कहानीमा त्यतिबेला शंका उब्जियो जब प्रिटोरिया न्यूजले अस्पतालको नाम बताउन असफल रह्यो । साथै शहरका थुप्रै अस्पतालले आफ्नोमा कसैले पनि एकैपटक १० बच्चा नजन्माएको बताए ।
त्यसको १० दिनपछि इन्डिपेन्डेन्ट अनलाइनले स्टीव बिको अस्पतालमाथि आरोप लगायो । यता प्रिटोरिया न्यूजले भन्यो, ‘जन्मपछि दम्पत्तिबीच झगडा भयो र हप्तादिन पछि नै श्रीमानले श्रीमती हराएका कारण मानिसहरुलाई दान दिन बन्द गर्न अपिल गरे । तर श्रीमतीले भने श्रीमानले बच्चाले पाइरहेको पैसा हडप्न चाहेको बताइन् । ’
अधिकारीका अनुसार यति नै बेला सामाजिक कार्यकर्ताले सिटोलेको खोजी गरे र उनलाई पछिल्लो शुक्रबार परीक्षणका लागि अस्पताल भर्ना गराए । बीबीसी
तालिबानले लागू गर्‍यो छात्राहरूका लागि अनौठो नियम, पुरुषहरूसँगै अध्ययन गर्न नपाउने
एजेन्सी, भदौ २८ अफगानिस्तानका विश्वविद्यालयहरूलाई लिङ्गका आधारमा विभाजित गरी पोसाक सम्बन्धी नयाँ नियम लागु गरिने
अफगानिस्तानको तालिवान सरकारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने चीनको घोषणा
काठमाडौं, भदौ २५ चीनले अफगानिस्तानमा बनेको नयाँ तालिवान सरकारलाई समर्थन जनाएको छ । विश्वका धेरै
अफगान महिलाले सरकारमा सहभागिताको माग उठाएपछि तालिबानले के भन्यो ?
एजेन्सी, भदौ २१ तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता हातमा लिएपछि आफ्नो अधिकारका लागि देशको राजधानीमा दर्जनौँ महिलाहरूले
नेपालसहितका १० एसियाली मुलुकमाथि फिलिपिन्सले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा
फिलिपिन्स, भदौ २० फिलिपिन्सले नेपालसहित १० एसियाली मुलुकलाई लगाउँदै आएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको
पूर्वी लद्दाखमा चिनियाँ ड्रोनको जासुसी
एजेन्सी, असोज ११ भारत र चीनबीच गत वर्षदेखि तनाव जारी छ। पूर्वी लद्दाखको विवादित क्षेत्रमा
काठमाडौं, असोज ११ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दुई/दुईपटक
काठमाडौं, असोज ११ हाल मनसुन न्यून चापीय रेखा औसत स्थानभन्दा केही दक्षिणतिर रहेको छ। मौसम